Imidlalo eBakubung Bush Lodge - Imidlalo, Izinto zokwenza e-Sun City
Imidlalo eBakubung Bush Lodge
Bukela phambili emidlalweni yemidlalo ejabulisayo ngesikhathi usuhambo lwakho eduze neSun City ePilanesberg National Park, eNingizimu Afrika.
Hlola isihlahla sase-Afrika emidlalweni ejabulisayo yemidlalo ngenkathi ubheka i-Big Five, okungukuthi ingonyama, ingwe, ubhejane, indlovu kanye ne-buffalo.
Uhlelo lwezingane olukhethekile endaweni yokuhlala yasePilanesberg lwakhiwe ukuze kugcinwe izingane zakho. Lokhu okuhlangenwe nakho okuyingqayizivele nemfundo kuqondiswa abasebenzi abaqeqeshwe nabaqeqeshiwe futhi kuhloswe kubantwana abaneminyaka engama-6 ubudala kuya eminyakeni engu-12.
Izingane zakho zizohlanganyela ekuhambeni kwe-safaris, zibavumele ukuba bafunde kabanzi mayelana nokuphila kwezinyoni, izilwane zasendle, nokuchichima kwezimila ePilanesberg National Park. Ekupheleni kwalolu hlelo, ingane ngayinye izothola ibheji lomsebenzi kanye nezinsimbi.
Izinto zokwenza e-Sun City
Ungakwazi ukungena enkonzweni yokuhamba ngebhasi eSun City ngenkokhelo yokubiza. Jabulela igalofu nxazonke noma ubuke enye yemibukiso ebukhoma ezindaweni zokuzijabulisa zikaSun City. Ngesikhathi uhlala eSouth Africa iholide eSun City, ungase futhi uvakashele i-Crocodile Farm kanye nePredator Park ethakazelisayo.